कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित भएर चेतनशील भए । चेतनशील भएपछि काङ्ग्रेस नै देशको उद्धारक हो भनेर बुद्धिजीवी कहलिए । बुद्धिजीवी भएपछि देशमा काङ्ग्रेस होइन राजसंस्था चाहिँदो रहेछ भनी निचोड निकाले । उनी आफ्नो कुरामा कैयौँ दृष्टिकोण बोकी हिँड्दैनन् । भन्छन्, म ‘स्पष्ट र सपाट’ छु । बबरमहलस्थित कार्यालयको उनको कार्यकक्षमा देशी–विदेशी ‘तानाशाह’हरुको तस्बिर फ्रेम गरेर गौरवपूर्ण तवरले झुण्ड्याइएको छ । जसमा विश्वका अत्यन्त बदनाम तानाशाह हिटलरदेखि स्वदेशी तानाशाह जङ्गबहादुर राणा हुँदै चुनाव जितेर फासीवादको अभ्यासमा लागेको आरोप झेलिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म छन् । अचम्म के भने त्यहाँ स्वतन्त्रताका लागि लड्ने र स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नेहरुलाई एउटै दर्जामा राखिएको छ । यस्तो किन त ? उनको सीधा जवाफ छ– म राष्ट्रवादीहरुलाई निकै मन पराउँछु, चाहे ती हिटलर हुन् अथवा गान्धी । हाम्रो देशको पीडा के हो भने हामी हिटलर पनि जन्माउन सक्दैनौँ । भन्नुको अर्थ हिटरल पनि अरुले नै जन्माइदिनुपर्ने अवस्था नेपालको छ । उनै पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीसँग रातोपाटीका लागि अन्तरवार्ता गरेका छन् नेत्र पन्थी र नरेश ज्ञवालीले ।
राजाको विज्ञप्तिलाई कतिपय मानिस बेजिङ र दिल्ली भ्रमणसँग गाँसेर हेर्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ? यो प्रश्न राजालाई नै सोध्नु बेस हुन्छ । उहाँले कुन मनसायले त्यो भ्रमण गर्नुभयो । हामीले बाहिरबाट विश्लेषण गर्ने हो । यो विज्ञप्ति राजको चाइना भ्रमण अथवा अन्य कुनै देशको भ्रमणसँग जोडिएर आएको भन्ने मलाई लाग्दैन । यो देशको आन्तरिक परिस्थितिको उपज हो । वर्तमानमा देशले जुन नियति भोगिरहेको छ, त्यसैको उपज हो ।
यहाँले चाहिँ संविधान नै कार्यान्वयन गर्न पर्दैन भनेर बारम्बार भनिरहनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयन नै नगर्ने भए मुलुकलाई संविधान किन चाहिएको ? यो संविधान मुलुकलाई चाहिएकै होइन । यो संविधान मात्र होइन कुनै पनि संविधान मुलुकलाई चाहिएको होइन । मुलुकलाई चाहिएको शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विकास हो । संविधान नहुँदा पनि मुलुकलाई चल्छ भन्ने उदाहरण बेलायत र इजरायलमा छ । त्यसकारणले संविधानले न मुलुक चल्छ भन्ने होइन । यो संविधानले झनै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यो पहिले नै थाहा थियो । अब रह्यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा यही अन्तरवस्तु बोकेको संविधान जारी नै नभएको भए पनि हुने थियो । किनभने मानिसहरुमा आशा हुन्थ्यो मानिसमा भविष्यमा संविधान बनेपछि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा हुन्थ्यो अब जारी भयो यो कार्यान्वयन गर्न थालियो भने हजार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन्न ।